समाचार Archives - News 88 Post
यस्तो बन्यो रवि लामिछाने नेतृत्वकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति (सूचीसहित)
July 1, 2022 N88LeaveaComment on यस्तो बन्यो रवि लामिछाने नेतृत्वकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति (सूचीसहित)
काठमाडौंं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप)को केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँगै पार्टीले २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरेको हो । “आज मिति २०७९ असार १७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र घण्टी रहेको छ,” पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा […]
भात खान पल्केपछि अमेरिकाबाट ल्याइयाे चामल, गैरीखेत बाँझै !
July 1, 2022 N88LeaveaComment on भात खान पल्केपछि अमेरिकाबाट ल्याइयाे चामल, गैरीखेत बाँझै !
काठमाडौँ । सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा करिब रु २० अर्बको चामल आयात भएको थियो । १० वर्षपछि अर्थात् चालु आव ०७८÷७९ को ११ महिना ९जेठ मसान्त० सम्म आइपुग्दा सो अङ्कमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै रु ५० अर्बको चामल, […]
कुलमानले गरे अर्काे कमाल, बिजुली बेचेर प्राधिकरणले रातारात कमायो यति धेरै…
July 1, 2022 N88LeaveaComment on कुलमानले गरे अर्काे कमाल, बिजुली बेचेर प्राधिकरणले रातारात कमायो यति धेरै…
काठमाडाैं । गरे के हुँदैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपाल आफैँ चरम लोडसेडिङमा थियो । बिजुली खरिद गरेर ल्याउँदासमेत दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । प्राधिकरणभित्र मौलाएको अराजकता नियन्त्रण हुनुको साटो थप विस्तारित भएको थियो । नागरिक चरम अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । औद्योगिक क्षेत्र ध्वस्त थियो । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पैसा बैंकमा राखेर […]
त्रिवि सेवा आयोगमा परीक्षा दिने १४ सय ६३ जनामध्ये एक जना मात्रै पास !
June 29, 2022 N88LeaveaComment on त्रिवि सेवा आयोगमा परीक्षा दिने १४ सय ६३ जनामध्ये एक जना मात्रै पास !
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सहभागीहरू सबैजसो फेल भएका छन्। उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक, लेखा अधिकृत पदमा लिइएको लिखित परीक्षामा एक हजार चार सय ६३ जना सहभागी थिए। तर मुख्य कार्यालय सहायक पदमा एक जना मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका छन्। २०७८ मंसिर ५, ६ र ७ गते […]
किन खाइन्छ असार १५ मा दही चिउरा ?
June 29, 2022 N88LeaveaComment on किन खाइन्छ असार १५ मा दही चिउरा ?
काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवसका अवसरमा आज खेतमा काम गरी दहीच्युरा खाएर मनाइँदै छ । कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही च्युरा खान्छन् । यसबेला दहीच्युराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ । असार १५ लाई नेपाली समाजमा दहीच्युरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । […]
June 29, 2022 N88LeaveaComment on देशभर भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडाैं । मनसुनी वायुको प्रभावले देशभर आङ्शिकदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा भारी वर्षा हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनसार मनसुनी न्यून चापीय रेखा औषतभन्दा उत्तरतिर (नेपालको दक्षिणी भू–भाग नजिक) रहेकाले भारी वर्षा भएको छ । शुक्रबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण […]
June 27, 2022 N88LeaveaComment on आदर्श लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँट
काठमाडाैं । आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको साधारण सेयरको बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको कार्यालयमा आज प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बाँडफाँट भएको हो । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपिओमा १६ लाख ७४ हजार ६५२ जनाले एक करोड ८४ लाख २४ […]
धुरुधुरु रुँदै यसरी विदा भइन् मन्त्री झाँक्री, बगे आँशुकाे बलिन्द्रधारा !
June 26, 2022 N88LeaveaComment on धुरुधुरु रुँदै यसरी विदा भइन् मन्त्री झाँक्री, बगे आँशुकाे बलिन्द्रधारा !
काठमाडौँ। राजीनामा दिएपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री निकै भावुक बनेकी छन् । अत्यन्तै भावुक बनेकाले उनले पत्रकारसँग खुलेर बोल्न पनि सकिनन् । सम्मेलनमा कर्मचारीले मन्त्रालयको कार्य विवरण बुझाएका थिए । उनीहरुले ‘फेरि भेटौंला’ भन्दै मन्त्री झाँक्रीको विदाइ गरेका थिए । झाँक्री सुरुदेखि भावविव्हल हुँदै आफू बोल्न सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको बताइन् । पत्रकारको तर्फबाट […]
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, यी हुन् नेकपा एसबाट नयाँ मन्त्रीहरु
June 26, 2022 N88LeaveaComment on मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, यी हुन् नेकपा एसबाट नयाँ मन्त्रीहरु
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मन्त्री हेरफेर गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री हेरफेर गरेकी हुन्। एकीकृत समाजवादीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भवानी खापुङ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा शेरबहादुर […]
June 26, 2022 N88LeaveaComment on मन्त्री प्रेम आलेले दिए राजीनामा
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । आज संसद् बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राजीनामापत्र बुझाएको बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट सरकारमा रहेका अरू मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए/नदिएको बारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । “अरू मन्त्रीहरूको मलाई थाहा छैन । उहाँहरूलाई नै […]